Delta Chat 1.2 Abia na Uzo mkpirisi igodo, Ogwu onyonyo na More | Site na Linux
Delta Chat 1.2 na-eso ụzọ mkpirisi keyboard, ihe onyonyo ndị ọzọ na ndị ọzọ
Ntọhapụ nke ụdị ọhụrụ nke Delta Chat Desktop 1.2 ka ekwuputala. Nke a bụ onye ozi na na-eji email dịka njem karịa sava yayabụ ọ bụ nkata email na ọkachamara email pụrụ iche nke na-arụ ọrụ dịka onye ozi.
Delta Chat anaghị eji sava ya ọ nwere ike ịrụ ọrụ site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sava ozi ọ bụla na-akwado SMTP na IMAP (A na-eji usoro Push-IMAP eme ihe iji chọpụta ngwa ngwa mbata nke ozi ọhụrụ).
Izo ya ezo na OpenPGP na Autocrypt ọkọlọtọ na-akwado maka mfe akpaka nhazi na igodo mgbanwe na-enweghị iji sava isi (igodo na-akpaghị aka-ebute site ná na mbụ ozi zitere).
Ntinye ihe ntinye ederede na-adabere na koodu rPGP, nke gafere nyocha nchebe onwe ya n'afọ a. A na-ezochi okporo ụzọ site na iji TLS na mmejuputa usoro ụlọ akwụkwọ ọ bụla.
1 Banyere Delta Chat
2 Main ọhụrụ atụmatụ nke Delta Chat 1.2
3 Etu esi wụnye Delta Chat 1.2 na Linux?
Banyere Delta Chat
Delta Chat bụ onye njikwa njikwa zuru oke yana ejikọtaghị ya na ọrụ ndị etiti. Maka ọrụ, ọ dịghị mkpa ịdebanye aha maka ọrụ ọhụrụ; ị nwere ike iji email dị nụ dị ka njirimara.
Ọ bụrụ na onye nta akụkọ ahụ anaghị eji Delta Chat, ọ nwere ike ịgụ ozi dị ka leta nkịtị. A na-alụ ọgụ megide spam site na nzacha ozi sitere na ndị ọrụ amaghị (site na ndabara, ọ bụ naanị ozi sitere na ndị ọrụ adreesị akwụkwọ na ndị zitere ozi na mbụ gosipụtara, yana nzaghachi na ozi nke ha). Enwere ike igosipụta faịlụ ndị agbakwunyere na onyonyo na vidiyo.
Group chat e kere eke na-akwado na nke otutu sonyere Nwere ike ikwurịta okwu. N'otu oge ahụ, ọ ga-ekwe omume ijikọ ndepụta nke ndị sonyere na otu a, nke na-anaghị ekwe ka ndị na-enwetaghị ikike gụọ ozi (a na-enyocha ndị sonyere site na iji mbinye aka cryptographic, na ozi ezoro ezo site na iji nzuzo ezoro ezo).
Edere ụdị nke isi ụlọ akwụkwọ dị ugbu a na Rust (edepụtara nke gara aga na C). Enwere folda maka Python, Node.js na Java. Njikọ njikọ na-aga n'ihu na mmepe. Enwere DeltaChat maka libpurple, nke nwere ike iji kernel ọhụrụ Rust na kernel ochie C.
Main ọhụrụ atụmatụ nke Delta Chat 1.2
Delta Chat 1.2 rutere na nchekwa data nke ndị na-enye ọrụ na ọrụ ozi na ozi na nhazi ụdị, tinye ụzọ mkpirisi igodo ọhụrụ nke bụ "Ctrl + K" iji chọọ adreesị akwụkwọ na "Alt + ← ↓ ↑ →" ka ịkwaga na nkata ahụ.
Ke adianade do, nsonye nke usoro ohuru nke eserese na ikike ijikọ onyonyo na profaịlụ.
N'aka nke ọzọ, ndị ike ide ọtụtụ ozi ma hazie "Gosi ozi ịntanetị oge ochie", na-enye onye ọrụ ohere iji Delta Chat dị ka ndị ahịa ahịa email mara mma.
Ọzọ nke mgbanwe na-apụta ìhè na nke ọhụrụ a version bụ nkwado iji jiri ọtụtụ akaụntụ n'otu oge na kwa ike ile onyonyo na ihuenyo zuru.
Iche iche nkata maka ozi echekwara
Nkwado maka ịgbanwe font size na mbugharị larịị (View -> bia lekọtara)
Iji otu aha na ubi na isiokwu nke leta
Etu esi wụnye Delta Chat 1.2 na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye ụdị ọhụụ nke Delta Chat, Nwere ike nweta nwụnye nchịkọta si ya ukara website. Njikọ bụ nke a.
N'ebe a, ịnwere ike ịnweta nchịkọta maka nkesa na nkwado maka ngwugwu ụgwọ. Enwere ike ịnweta ngwugwu site na njedebe site na ịpị:
Na nwụnye na iwu na-esonụ:
Tambien a na-enye ngwugwu AppImage, nke enwere ike inweta site na iji kọmputa ede:
Ha na-enye ikikere nke ngwa a:
Ha na-agba ọsọ na:
N'ime ibe ị nwekwara ike ịchọta njikọ maka ntinye ya na gam akporo na iOS.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Delta Chat 1.2 na-eso ụzọ mkpirisi keyboard, ihe onyonyo ndị ọzọ na ndị ọzọ
Obi dị m ezigbo ụtọ ịhụ ka ngwa ndị a si maa mma ma baa uru.
Cloudflare Public DNS: A gbasaa ọrụ ndị ọzọ ugbu a
Bashtop na Spdtest: Ngwa Ntanetị Mmasị Na-akpali Mmasị maka GNU / Linux